12 ỤLỌ - ỤLỌ & Onye nrụpụta
ỤLỌ ỤLỌ Ngwaahịa ỤLỌ 12 ỤLỌ
Product source： 8 ỤLỌ 10 W Imported lamp beads
Ngwaahịa: L106*W8*H18 cm
Applicable venue： Weddings, W Igwe sịga na-ahụ maka njikwa anya, clubs
Our company is a professional stage lighting manufactory in Guangzhou , Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike&Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike , Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike , Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike , Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike . Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike , Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike . Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike . Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike . Internationalized na-eduga zuru ụwa ọnụ ọkụ ụlọ ọrụ na ọhụrụ ike .
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị .(Talk in detail )
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị: Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị: Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị,Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị,Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị,ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị:
1)ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị:ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị,ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị(ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị,ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị)
2)ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị
3)ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị:ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị,ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị,ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị,ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị
4)ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị